ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သိန်း ၂၄၀၀ တန်ကဗျာဟာ မာယာကော့ဗ်စကီးဆီက ကူးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားပျံ့နှံ့ | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
Myanmar State Counsellor Aung San Suu Kyi leaves after delivering address before students of Yangon University general assembly in Yangon on August 28, 2018. - The address was Aung San Suu Kyi's first public appearance after Facebook banned Myanmar's army chief and other top military brass on August 27 afteraUN investigation recommended they face prosecution for genocide foracrackdown on Rohingya Muslims. (Photo by YE AUNG THU / AFP) (AFP / Ye Aung Thu)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သိန်း ၂၄၀၀ တန်ကဗျာဟာ မာယာကော့ဗ်စကီးဆီက ကူးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားပျံ့နှံ့
AFP မြန်မာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ သောကြာ 25 စက်တင်ဘာလ 2020 အချိန် 05:30နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည့်နေ့စွဲ သောကြာ 25 စက်တင်ဘာလ 2020 အချိန် 07:50
မကြာသေးခင်က အွန်လိုင်းလေလံပွဲမှာ ကျပ်ငွေ သိန်း ၂၄၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၈၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်) ရရှိခဲ့တဲ့ ဒါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ရေးမူကဗျာဟာ ရုရှားကဗျာဆရာဗလာဒီမီယာမာယာကော့ဗ်စကီးရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ကူးယူထားတာလို့ဆိုထားတဲ့ပို့စ်တွေ Facebook မှာ ပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပြောဆိုမှုတွေဟာ မှားယွင်းနေတာဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကဗျာဟာ “မာယာကော့ဗ်စကီးဆီက ကူးထားတာ လုံးဝမဟုတ်ဘူး” လို့ ရုရှားစာပေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက AFP ကို ပြောပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲမှားစေတဲ့ပို့စ်ကို Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တုန်းက တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်ရေ ၁၂၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပို့စ်ပါစာသားတချို့က အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “သိန်း၂,၄၀၀ နှင့် လေလံအောင်သွားသည့်ကဗျာ၏ မူရင်း ရုရှားကဗျာ”
အဲဒီပို့စ်မှာ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ရုရှား သုံးဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါဝင်ပြီး မူရင်းပို့စ်ပါ စာသားတွေကတော့ အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
( The Proud - ဂုဏ် )
( Poetry ) ကဗျာဆိုတာ
Echoes of the human mind
The roar of the human spirit
The song of human hope
This is the sound of our struggle
Cd###Moe Moe M Ko
နားလည်မှုလွဲမှားစေတဲ့ Facebook ပို့စ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
အဲဒီပို့စ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ရေးမူကဗျာဓာတ်ပုံနဲ့အတူ တခြားဓာတ်ပုံတွေလည်း တင်ထားပါသေးတယ်။
ပို့စ်မှာပါတဲ့ ရုရှားကဗျာဆရာမာယာကော့ဗ်စကီး (Mayakovsky) ရဲ့ပုံဟာ အွန်လိုင်းမှာ အရင်ကတည်းက ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ရုရှားသံရုံးရဲ့ twitter ဒီလင့်ခ်မှာတင်ထားတာမျိုးပါ။
နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံမှာပါဝင်တဲ့ရုရှားစာသားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “၁၈၉၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗလာဒီမီယာမာယာကော့ဗ်စကီးကိုမွေးဖွားသည်” ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံမှာပါဝင်တဲ့ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးပါစာသားတွေကတော့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သူရဲကောင်း Zoya Kosmodemyanskaya အကြောင်းဖြစ်တဲ့ Zoya နဲ့ Shura ပုံပြင်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာလက်ရေးမူဓာတ်ပုံကိုတော့ ကဗျာကိုလေလံတင်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာနဲ့ကဗျာဆရာ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီးရဲ့ Facebook ပို့စ်တစ်ခုမှာ မြင်ရပါတယ်။
လက်ရေးမူကဗျာဓာတ်ပုံကို မင်းထင်ကိုကိုကြီးက သူ့ Facebook ရဲက ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ တွဲတင်ထားတဲ့စာသားတွေက အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။
“ခြံအမှတ် ၅၄ က ကဗျာ
အဲဒီ အမေစုလက်ရေးနဲ့ ကဗျာစာရွက်လေးကို ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၁ နေ့ ညနေပိုင်း ၄ နာရီကျော်လောက်က ခြံအမှတ် ၅၄ အိမ် ထမင်းစားခန်းထဲမှာ အမေစုကိုယ်တိုင် ကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုလံဘီယာကိုသွားဖို့ လေဆိပ်ဆင်းခါနီးလေးမှာပါ။ အမေစုကို ကျွန်တော် ကန်တော့ခဲ့ပါသေးတယ်။ ။
ဒီကဗျာဟာ အကြိမ် (၂၀) မြောက် ကိုလီဘီယာနိုင်ငံတကာကဗျာပွဲတော်မှာရွက်ဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကနေ တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း မင်းထင်ကိုကိုကြီးက သူ့ Facebook ပို့စ်တစ်ခုရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဆိုထားပါသေးတယ်။
“အမေစုကို အဲဒီအကြောင်းပြောပြပီး ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးပေးဖို့ တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကဗျာတွေမရွတ်ခင် အမေစုကဗျာလေးကို ရွတ်ချင်လို့ပါဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအတွက် အမေစုက ဒီ “ကဗျာဆိုတာ”ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ရေးပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော့်ဖာသာ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းထားချင်တဲ့အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးပေးပါလို့ တောင်းခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာက ကဗျာဆရာတွေရှေ့မှာ ရွတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး တောင်းခဲ့တာပါ” (မူရင်းအတိုင်း)
-- တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကဗျာ --
ကဗျာလက်ရေးမူကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တုန်းက ရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်းလေလံပွဲတစ်ခုမှာ အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၂၄၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်) နဲ့ လေလံအောင်မြင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လေလံကနေရတဲ့ငွေတွေအားလုံးကို အခွန်ဆောင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးရဲ့ Facebook မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တုန်းက တင်ထားတာ ဒီလင့်ခ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဗလာဒီမီယာမာယာကော့ဗ်စကီးဟာ ရုရှားကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆိုဗီယက်ခေတ်ဦးစာပေလောကရဲ့ ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလို့လည်း အများက မှတ်ယူထားသူပါ။
နားလည်မှုလွဲမှားစေတဲ့အလားတူပို့စ်တွေကို Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း တင်ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ မှားယွင်းနေတာပါ။
ရုရှားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ၊ ကမ္ဘာ့စာပေအဖွဲ့အစည်း (the Russian Science Academy’s Institute of World Literature) မှာ မာယာကော့ဗ်စကီးရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ အထူးပြုလေ့လာနေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Vera Teriokhina ကတော့ ဒီကဗျာဟာ “မာယာကော့ဗ်စကီးဆီက ကူးချထားတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး” လို့ AFP ကို ပြောပါတယ်။
“မာယာကော့ဗ်စကီးရဲ့ဟန်နဲ့တော့ ဆင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကူးချထားတာတော့ လုံးဝမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ မာယာကော့ဗ်စကီးနဲ့ အကွာကြီးပါ။ ကဗျာဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ အားတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မာယာကော့ဗ်စကီးရဲ့ အယူအဆနဲ့ မာယာကော့ဗ်စကီးရဲ့စာပေဟန်တွေတော့ ဒီကဗျာမှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်” ဆိုပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ Vera Teriokhina က AFP ကို ဖုန်းကနေ ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။